စာစီစာရိုက်လုပ်ငန်းများအတွက် - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
ဟုတ်ကဲ့ စာစီစာရိုက်လုပ်ငန်းများတွင် အဆင်မပြေသည်များကို ဒီခေါင်းစဉ်လေးအောက်မှာ အကူအညီတောင်းခံနိုင်ပါတယ် ။ adobe pagemaker , microsoft excel, microsoft powerpoint များနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကူညီပေးပါမယ်ခင်ဗျာ
အောက်ပါအသင်းဝင် 31 ဦးတို့မှ ကျော်ခန့်ဇော် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုမိန်နွယ်, ကိုသဝေထိုး, ကျန်းသုငြိမ်း, ဆွိ, တက်တူး, နီလာချစ်သူ, ပုထုဇဉ်, မိုးမိုး, လမ်းပြကြယ်, လွင်မောင်အေး, သီရိမြိတ်, ဟန်မိုးလွင်, အလွမ်းမင်းသား, ကျော်ကျော်မောင်, မေထူးမောင်, အောင်မင်းကို, ဖြိုးမွန်ဦး, ainoki03, aung myint, aungkohtat, blackNwhite, kokomaung.ko28, kyansitthar, linthuraaung, minthumon, pannuko, phoetharlay, Starfire, tinkokooo, whiteman, yunademoe
ပြန်စာ - စာစီစာရိုက်လုပ်ငန်းများအတွက်
Adobe မှာ ဒ ရိုက်မရခဲ့ပါရင် file မှ perferences ကိုသွားပါ။ shocutkey က ctrl + k ပါ။ ပြီးရင် More ကို ထပ်သွားပါ။ shocutkey က alt + o ပါ။ use typographer's quotes ကို uncheck ပါ ။ ok. ok . ဒါဆို ဘယ်အချိန်ရိုက်ရိုက် adobe မပိတ်မချင်း ဒ ကိုရိုက်လို့ရပါပြီ။ ဒါမှမဟုတ် ရံဖန်ရံခါသာ ဒ ကိုသုံးရရင် ctal + alt + ဒ ကိုရိုက်လိုက်ပါ။ ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ အားလုံးအဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်။
အောက်ပါအသင်းဝင် 20 ဦးတို့မှ ကျော်ခန့်ဇော် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုစံငြိမ်း, ဆွိ, မထက်, မွန်ကြီး, ရုပ်ဆိုး, အလွမ်းမင်းသား, အိုက်ထွန်း, မေထူးမောင်, အောင်မင်းကို, ဖြိုးမွန်ဦး, aprilflame, blackNwhite, cherry, kaungkinpyar, kokomaung.ko28, kyansitthar, linthuraaung, minthumon, phyuphyukyaw, powerlight02
16-01-2009, 09:47 AM
၀င်ဖောလိုက်အုံးမယ်... အလွယ်နည်းလေးလည်း ရှိသေးတယ်နော် Ctrl+k , Alt+o , Alt+q , Enter , Enter ဆိုရင်တော့ ပိုမြန်သွားပြီ...
အောက်ပါအသင်းဝင် 20 ဦးတို့မှ သက်ပိုင် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုစံငြိမ်း, ဆွိ, နီလာချစ်သူ, ဖယောင်း, မထက်, အလွမ်းမင်းသား, အိုက်ထွန်း, အေးချမ်းမောင်မောင်, blackNwhite, centurymg, cherry, kyansitthar, linthuraaung, maJunior, minthumon, phyuphyukyaw, powerlight02, whiteman, yunademoe, zawwinoo
ဒ ကိုအဲဒီလိုခဏခဏ၀င်မချိန်းပဲနဲ့ အမြဲတမ်းပေါ်အောင်လုပ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ အဲဒါက PageMaker စဖွင့်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ စာရွက်တွေ ဘာတွေသွားမယူပါနဲ့ဦး။ အပေါ်မှာ ကိုကျော်ခန့်ဇော်ပြောသလိုမျိုး File - Perference - general ကိုသွားပြီး ပြင်လိုက်ပါ။ နောက်ဘယ်တော့မဆို ဒ ရိုက်လို့ အိုကေသွားစေရပါမယ်။ စမ်းကြည့်ကြပါဦးနော်။
အောက်ပါအသင်းဝင် 20 ဦးတို့မှ breezes အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုစံငြိမ်း, ဆွိ, ဇာနည်စိုး, မထက်, အလွမ်းမင်းသား, အိုက်ထွန်း, အောင်မင်းကို, မြှားနတ်မောင်၅၂၈, AZM, blackNwhite, centurymg, cherry, kyansitthar, linthuraaung, minthumon, nyeinlay, phoelapyaee, phyuphyukyaw, powerlight02, yunademoe
အဲနောက်တစ်ခုကျန်ပါသေးတယ်ခင်ဗျာ။ အဲဒါကတော့ font ချိန်းတဲ့အချိန်မှာပါ အပေါ်မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုမျိုးပဲ new မတောင်း ရသေးတဲ့အချိန်မှာပဲ ကိုယ်အမြဲတမ်းရိုက်နေမယ့် font နဲ့ font size, leding တွေကို တစ်ခါတည်းချိန်းထားလိုက်လို့ရပါတယ်။
Type Menu -- Character (Ctrl + T) မှာပါခင်ဗျာ။ အဲဒါဆိုရင်လဲ font နဲ့ font size တွေက ကိုယ်ဘယ်အချိန် P.M 7.0 ကိ်ုဖွင့်ဖွင့် အမြဲတမ်း ကိုယ်ချိန်းထားတဲ့ဖောင့်ပဲပေါ်နေပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ။ စမ်းကြည့်ကြပါဦးနော်။
အောက်ပါအသင်းဝင် 10 ဦးတို့မှ breezes အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
နီလာချစ်သူ, အိုက်ထွန်း, အောင်လွင်ဦး, ဖြူဖွေး, ၀ါဆို, centurymg, kokomaung.ko28, kyansitthar, linthuraaung, minthumon
columm ၂ ခု နဲ့ row ၂ ခု လိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ utlities ကနေ plug in ထိုမှ တဆင့် guid manager ကိုသွားပါ။ guide types မှာ rules ပေး၊ columm မှာ2ပေး။ row မှာ2ပေး ပါ။ ဒါဆို columm ၂ ခု နဲ့ row ၂ ခု ရပါပြီ။ gutter ကတော့ columm2ခုကြား၊ row2ခုကြား အကွာအဝေးကို ဆိုလိုတာပါ။ စမ်းကြည့်လိုက်ပါအုံးခင်ဗျာ။
အောက်ပါအသင်းဝင် 8 ဦးတို့မှ ကျော်ခန့်ဇော် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဂစ်တာလူလေး, နီလာချစ်သူ, ဖြိုးမွန်ဦး, kokomaung.ko28, kyansitthar, linthuraaung, minthumon, moe gyi
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ ngwe အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
kyansitthar, minthumon, shinthantnyein
Pagemaker နဲ့ပတ်သက်ပြီး..
အရေးပေါ် ပြသနာဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ နည်းလေးတစ်နည်းပြောပါ့မယ်..
ဥပမာ- စာရွက်စာတမ်းတစ်ခုပေါ့ ...ရိုက်ပေးလိုက်ပြီး အတည်ပြုလိုက်တယ်ဆိုပါတော့...
ပြီးပြီဆိုပြီမှ...typing error ဖြစ်ဖြစ် ..လူကြီးက အဲဒီစာပေါ်မှာ တစ်ခုခုတပ်ဖြည့်ချင်လို့ဖြစ်ဖြစ်..
သဘောကောင်းတဲ့ လူကြီးဆိုရင်တော့ ..ကောင်းပါရဲ့..ထပ်တင်ပြဖို့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူး ဆိုရင်တော့..)
လေးဘဲ ရွေးပြီးထပ်ဖြည့် print ထုတ်ချင်တယ် ဆိုပါတော့...
ပထမရိုက်ထားတဲ့ စာကို Pointer နဲ့ Select လုပ်ပါ..
ပြီးရင်..Element > Non-printing ကို check လုပ်ထားပါ..
print ထုတ်တော့မယ်ဆိုရင်တော့ ပထမအတည်ပြုပြီးသားစာရွက်လေးကို ပြန်ထည့်ပေးလိုက်ပေါ့..
ဒါဆို Non-printing ဆိုတာဘာကိုသုံးတယ်ဆိုတာဆိုတဲ့....ရည်ရွယ်ချက်လေးကိုသိရမှာပါ..
အောက်ပါအသင်းဝင် 24 ဦးတို့မှ maJunior အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုစံငြိမ်း, ငပြုံး, ဇာနည်စိုး, တက်တူး, နီလာချစ်သူ, မထက်, မွန်ကြီး, ရုပ်ဆိုး, သက်ပိုင်, အိုက်ထွန်း, ဇော်ရဲပိုင်, ဖြူဖွေး, ဖြိုးမွန်ဦး, Aung Aung, blackNwhite, kokomaung.ko28, kyansitthar, linthuraaung, minthumon, naynaw, phoelapyaee, powerlight02, rat, whiteman
ပို့စ် 12 ခုအတွက် 35 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
တစ်ခါတစ်လေ adobe pagemaker ဖိုင်တစ်ခုကို ပထမဖွင့်လိုက်ရင် အပြည့်မပေါ်ဘဲ လေးပုံတစ်ပုံ၊ နှစ်ပုံတစ်ပုံလောက်ဘဲ ပေါ်လာတဲ့ အခါဖြစ်တတ်ပါတယ်။ application တစ်ခုလုံးကို ပြန်ပိတ်ပြီး ပြန်ဖွင့်လိုက်မှ အပြည့်ပြန်ပေါ်လာတယ်။ ဘာ့ကြောင့်လဲ သိရင်ပြောပြပေးစေချင်ပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ သီတာ-၁၅ အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by သီတာ-၁၅
application error ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်.. uninstall လုပ်ပြီး ဆော့ဝဲရှိရင်ပြန်တင်ကြည့်လိုက်ပါ..
စက်မလေးအောင် double Click လုပ်ပြီးသုံးနိုင်တဲ့ Potable လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်..
တက်တူး, ဖြူဖွေး, kokomaung.ko28, kyansitthar, minthumon, naynaw, royalheartgate
ပြန်စာ - Document Map ကို
ကျနော်က Winword2003 ပေါ်မှာ Microsoft Console တွေလို့ Tree pane သဘောမျိုး
စာတစ်ကြောင်းရဲ့ရှေ့က + လေးကို နှိပ်ရင် သူနဲ့သက်ဆိုင်ရာ အုပ်စုငယ်လေးတွေ ဖြည်ချတယ်
စာတစ်ကြောင်းရဲ့ရှေ့က - လေးကို နှိပ်ရင် သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ အုပ်စုငယ်တွေအားလုံးဟာ အုပ်စုတစ်ခုအဖြစ် စုသွားတယ်
အဲဒီလိုမျိုးလေးတွေကို Winword ရဲ့ Main Document ပေါ်မှာ ပေါ်စေချင်တာဗျာ
သက်ဆိုင်ရာ အုပ်စုတွေကို heading 1,2,3 ဆိုပြီး လုပ်ရင် အဲဒါမျိုးကို Document Map ထဲမှာဘဲ ပေါ်နေတယ် Main Document ပေါ်မှာ ပေါ်အောင် ဘယ်လိုများ
Last edited by kozaw.dagon; 04-02-2009 at 02:29 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင်4ဦးတို့မှ kozaw.dagon အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
အိုက်ထွန်း, kyansitthar, linthuraaung, minthumon
Page Maker 7.0 မှာ Auto စာမျက်နှာတပ်ပြီး ... စာအုပ်ပုံစံ ထုတ်ချင်ရင်တော့ စာမျက်နှာ တပ်တဲ့နည်းလေးပါ...
ပထမဆုံး pagemaker ကိုဝင်ပြီး New (Ctrl+N) ယူလိုက်ပါ...စိတ်ကြိုက် စာမျက်နှာတွေရွေးပြီး ဘယ်ဘက်ထောင့်က Document Master မှာ Click တစ်ချက်ချပါ... ပြီးရင် T ကို ယူပြီး စာမျှက်နှာမှာ Cusor ချ... Ctrl+Alt+P နိပ်ပါ... ဘယ်ဘက်က စာမျှက်နှာအတွက် LM ပေါ်ပြီး ညာဘက်က စာမျှက်နှာအတွက် RM ပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်... အဲဒါဆိုရင်တော့ နောက်ကစာမျှက်နှာများ ဘယ်လောက်တိုးတိုး စာမျှက်နှာနံပါတ် Auto တပ်ပြီးသားဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်... အလယ်၊ ဘယ်ဘက်၊ ညာဘက်ကတော့ မိမိစိတ်ကြိုက် Justify ညှိပြီး ထားလို့ရပါတယ်... အဆင်ပြေကြပါစေဗျာ...အဆင်မပြေရင် thatpyaing@gmail.com ကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်...
အောက်ပါအသင်းဝင်6ဦးတို့မှ သက်ပိုင် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
တက်တူး, အိုက်ထွန်း, ဖြူဖွေး, centurymg, kyansitthar, minthumon
22-02-2009, 11:01 PM
မေးခွန်းလေး တချို့ မေးချင် လို့......
(၁)Microsoft word မှာ အပိုင်းကိန်းတွေ ကိုဘယ်လိုိရိုက်ရ သလဲ ပြောပြပေးပါ.....
ဥပမာ- ကျွန်တော် က calculations တွေမှာ ပိုင်းဝေရော ပိုင်းခြေ ပါ ကိန်းတန်း အရှည်ကြီး ရိုက်ချင်တယ်....
ညီမျှချင်း သင်္ကတေ ရဲ့ အလယ်နဲ့ အပိုင်းကိန်း မျဉ်းကိုလည်း တတန်းတည်း ဖြစ်စေ ချင်တယ် ဆို ရင် လေ....
(၂) superscript , subscript ပြောင်းရင် တလုံးချင်းစီ ပဲ ပြောင်းလို့ရတာလား ?
အများကြီး တခါတည်းပြောင်းလို့ ရမလားသိချင်ပါတယ်...
ဥပမာ- (a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3) အဲ့ ဒီထဲကဂဏန်းတွေအား လုံးကို superscript လုပ်ချင်တယ်......
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ မြင့်မိုရ် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Microsoft Office 2007 မှာတော့.အဲ့လိုEquation တွေရိုက်လို့ရအောင်..တခါထဲထည့်ထားပါတယ်.ရိုက်လို့ရပါတယ်
Insert--> Equation ဆိုရင်ထည့်လို့ရပါတယ်..Office 2003မှာတော့မရပါဘူး..Equation Editor လိုမျိုး.Mathtype လိုမျိုး software တမျိုးမျိုးနဲ့တွဲသုံးမှအဆင်ပြေနိုင်ပါလိမ့်မယ်..
အောက်ပါအသင်းဝင်6ဦးတို့မှ stability09 အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မြင့်မိုရ်, centurymg, kyansitthar, minthumon, naynaw, shinthantnyein
24-03-2009, 11:12 PM
Microsoft Word နဲ့ ပက်သတ်တဲ့ အကြောင်းအားလုံးကိုမြန်မာလို သိနိုင်မည့် Link သို့မဟုတ် ဘယ်သည့်နေရာတွင် ရနိုင်မည် ဆိုတာကိုသိချင်ပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.........။
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ ကလျာအောင် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by ကလျာအောင်
Originally Posted by ကလျာအောင်
Microsoft Word နဲ့ ပက်သတ်တဲ့ အကြောင်းအားလုံးကိုမြန်မာလို သိနိုင်မည့် Link သို့မဟုတ် ဘယ်သည့်နေရာတွင် ရနိုင်မည် ဆိုတာကိုသိချင်ပါသည်။
အောက်ကလင့်မှာ မြန်မာလို စာအုပ်တွေ ရှိပါတယ်။
Learning Word XP (ဦးအောင်လင်း)
Office Word XP(DCL)
**(Virtual Drive တင်ရန်လိုသည်)
setup folder ထဲမှ setup.exe ကို double click လုပ်ပြီး လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
မရဘူးဆိုရင် အောက်ကလင့်မှ ရှင်းလင်းချက်ကို ဖတ်ရူပြီး လိုက်လုပ်ကြည့်ပါ။
Virtual drive software ရယူရန်
Last edited by phyomyintthein; 21-11-2009 at 06:56 PM.. Reason:ူlink ဖြည့်ရန်
ဂတုံးလေး, ညီစေမင်း, ဇော်ရဲပိုင်, bonge, centurymg, kyansitthar, lazyguylay, minthumon, naynaw, phoetharlay, shinthantnyein, tu tu
မကလျာအောင် ခင်ဗျာ ...
ဒီ စာအုပ်ကလေးကတော့ word 2002 ပါ ... family ထဲကပဲ ယူထားတာပါ လေ့လာလို့ ရမယ့်နေရာလေးတွေကတော့ links တွေကတော့ ကျနော် သိသလောက်ပေါ့နော် ...
အပေါ်ကလင့်လေးမှာ အတော်လေးကောင်းပါတယ် ခင်ဗျာ ... အဆင်မပြေတာလေးတွေ ကို လည်း မိသားစု ၀င်တွေ ကို မေးမြန်းနိုင်ကြောင်း ပါခင်ဗျာ
ဇော်ရဲပိုင်, kyansitthar, minthumon, naynaw, tu tu
အခုလို. . . ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင်အောင်ရှင်းပေးနိုင်ကြတဲ့အတွက်. . .တကယ်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မိသားစုဝင်တွေ အတွက် အရမ်းကို အကျိုးရှိပါတယ်။ ကျေးဇူးနော်။
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ ယုဇနမောင် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
kyansitthar, minthumon, naynaw
ပို့စ် 13 ခုအတွက် 49 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ဒီနေရာမှာ Utilities ထဲက Book အကြောင်း ကျွန်တော်နည်းနည်းလောက်ဆွေးနွေးချင်းပါ။
တစ်ချို့က pagemaker 7.0 ကိုသိပ်သဘောမကြဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Word, Excel တို့လောက်မကောင်းဘူးထင်လို့ပါ။ အများစုက Utilities menu ကို အသုံးနည်းကြတယ်။ Utilities ထဲက book က ဘာအတွက်သုံးလဲဆိုတော့ Adobe Acrobat(pdf) လုပ်တဲ့အခါမှာ စာမျက်နှာတွေကို မိမိအသုံးပြုမယ့် ဖလင်ပေါ်မှာ မူတည်ပြီး စာမျက်နှာစီတဲ့အခါမှာ အသုံးပြုတယ်လို့ မှတ်သားရပါတယ်။
နောက်တစ်ခုက Template လုပ်နည်းပါ။ သူကတော့ မိမိအသုံပြုခြင်တဲ့ စာရွက်၊ စာရွက်ရဲ့ဘေးသား၊ ကော်လံ၊ Fount၊ Size၊ printer ဒါ့အပြင် Date၊ Time စတာတွေကအစ အသေးစိတ် တစ်ခါတည်းချိန်ပြီးတော့ Save လုပ်တဲ့အခါမှာ Save as type မှာ template ကိုရွေးပြီး တစ်ခါတည်းလုပ်ထားလို့ရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ စာစီစာရိုက်လုပ်ငန်းမှာ အများဆုံးအသုံးပြုတဲ resolution ကတော့ 300 dpi ဖြစ်ပါတယ်။
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ မောင်နတ်သား အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
kyansitthar, kyawswarl, minthumon
Find More Posts by မောင်နတ်သား
Pagemaker မြန်မာစာတစ်ကြောင်း အင်္ဂလိပ်စာတစ်ကြောင်းကို ဖောင့်သွားမချိန်းပဲနဲ့ Enter ခေါက်ပြိးရိုက်သွားတဲ့နည်းလေးပါ......................................
Pagemaker ဖိုင်ကိုဖွင့်ပြီးတော့ စာမျက်နှာကို ဖွင့်လိုက်ပါ.....
menu bar က window=>show style (^B) ဖွင့်လိုက်ပါ style box ကျလာပါလိမ့်မယ်.....
style box တွင်ပါလာသော style အားလုံးကို ဖြတ်ပစ်လိုက် အဲဒီလိုဖျက်ပစ်လိုက်ရင် no style တစ်ခုပဲကျန်ပါလိမ့်မယ်......
နိုးစတိုင်ကို double click တောက်လိုက်ပါ....
style option box လေး ကျလာပါလိမ့်မယ် name နေရာမှာ မိမိပေးချင်သောနာမည်လေးကို ပေးလိုက်ပါ.....
(ဥပမာ-မြန်စာသားထားချင်တယ်ဆိုရင် MM လို့ အလွယ်ပေးလိုက်ပါ မိမိနှစ်သက်သလိုပေးနိုင်ပါသည်)
ပြီးရင် character ကို နှိပ်လိုက်ပါ character specification box ပွင့်လာပါလိမ့်မယ်.........
charater specificstion box မှာ မြန်မာလိုထားချင်တဲ့အတွက် font မှာ မိမိအသုံးပြုမယ့် မြန်မာဖောင့်ကို ရွေးလိုက်ပါ size ကိုတော့ သင့်တော်သလိုထားလိုက်ပါ.........
ရွေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ ok ပေးလိုက်ပါ..........
style option ကိုလဲ ok လိုက်ပါ.. အဲဒီအခါကျရင် style box ထဲမှာ မြန်မာစာရိုက်ဖို့အတွက် မိမိပေးထားတဲ့ နာမည်လေး ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်..........
english font အတွက် နိုးစတိုင်ကို double click တောက်လိုက်ပါ....
(ဥပမာ-မြန်စာသားထားချင်တယ်ဆိုရင် EG လို့ အလွယ်ပေးလိုက်ပါ မိမိနှစ်သက်သလိုပေးနိုင်ပါသည်)
charater specificstion box မှာ အင်္ဂလိပ်လိုထားချင်တဲ့အတွက် font မှာ မိမိအသုံးပြုမယ့် အင်္ဂလိပ်ဖောင့်ကို ရွေးလိုက်ပါ size ကိုတော့ သင့်တော်သလိုထားလိုက်ပါ.........
style option box ကို ပြန်ရောက်လာပါလိမ့်မယ် style option box က next style မှာ မြန်မာလိုရိုက်ဖို့အတွက် ပေးထားနဲ့ name ကို ရွေးပေးလိုက်ပါ ပြီးရင် style option ကိုလဲ ok လိုက်ပါ.. အဲဒီအခါကျရင် style box ထဲမှာ အင်္ဂလိပ်စာရိုက်ဖို့အတွက် မိမိပေးထားတဲ့ နာမည်လေး ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်..........
style box ထဲက ပထမမြန်မာဖောင့်အတွက်လုပ်ထားသော style ကို double click နှိပ်လိုက်ပါ....
မြန်မာဖောင့်အတွက်ပေးထားသော style option box ကျလာပါလိမ့်မယ် style option box က next style မှာ စောစောက အင်္ဂလိပ်လို ရိုက်ဖို့အတွက်လုပ်ထားတဲ့ style ကို ရွေးလိုက်ပါ ပြီးသွားရင် ok လုပ်လိုက်ပါ........
ရပါပြီဗျာ text tool ရွေးပြီးတော့ စာရိုက်လို့ရပါပြီ....
မိမိက မြန်မာလို အရင်ရိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ မြန်မာစာအတွက်လုပ်ထားတဲ့ style ကိုရွေးလိုက်ပါ အဲဒီလိုရွေးပြီးသွားရင် စာရိုက်တာနဲ့ မြန်မာလိုထွက်လာပါလိမ့်မယ် မြန်မာလိုပြီးသွားလို့ အင်္ဂလိပ်လို ရိုက်မယ်ဆိုရင် enter ခေါက်လိုက်ယုံပါပဲ enter ခေါက်ပြီး စာရိုက်လိုက်တာနဲ့ အင်္ဂလိပ်စာသားထွက်လာပါလိမ့်မယ်........
အင်္ဂလိပ်လို စရိုက်မယ်ဆိုရင်လဲ အဲဒီနည်းလေးအတိုင်းပဲ ဆက်လက်ပြိးတော့ လုပ်ဆောင်လိုက်ပါ.....
အောက်ပါအသင်းဝင်7ဦးတို့မှ moeyetkh အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
တက်တူး, သက်ပိုင်, kokomaung.ko28, kyansitthar, kyawswarl, minthumon, naynaw
jpeg ဖိုင်မှာ ဓာတ်ပုံအားဖွင့်ကြည့်လိုက်လို့ ပုံကကြည်နေပြီးတော့ pagemaker ဖိုင်ထဲသို့ file=>place ကနေပြီးတော့ ထည့်လိုက်လို့ မှုန်ဝါးနေပြီးချိတ်တွေထနေတယ်ဆိုရင် ဒီလိုလေးလုပ်ကြည့်ပါ..............
(1) file=>preferences=>general (^K) ကိုနှိပ်လိုက်ပါ
(2) preferences box ကျလာရင် graphics display က high resolution ကိုရွေးလိုက်ယုံပါပဲ
(3) ပြီး 0k နှိပ်လိုက်ယုံပါပဲ
ဒါဆိုရင် ဓာတ်ပုံဟာ ကြည်လင်လာပါလိမ့်မယ်
အောက်ပါအသင်းဝင် 10 ဦးတို့မှ moeyetkh အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုမိန်နွယ်, သက်ပိုင်, အောင်လွင်ဦး, kokomaung.ko28, kyansitthar, kyawswarl, linthuraaung, minthumon, naynaw, phoelapyaee
- pagemaker 7.0 မြန်မာလို ebook လေးများရှိ မျှဝေပေးကြပါ ခင်ဗျာ
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ thetkazaw အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Originally Posted by thetkazaw
http://www.myanmarfamily.org/forum/s...0&postcount=44 မှာ သွားဖတ်ကြည့်ပါနော်..
Last edited by chitnyimalay; 11-05-2009 at 06:15 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင်7ဦးတို့မှ chitnyimalay အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
bonge, kyansitthar, kyawswarl, linthuraaung, minthumon, naynaw, tu tu
26-06-2009, 10:25 AM
ကျွန်တော်တို့ pagemaker မှာ eng နဲ့ မြန်မာလိုကို အလွယ်ဆုံးပြောင်းရိုက်နည်းလေးရှိပါတယ် အားလုံးသိကြမယ် လို့တော့ထင်ပါတယ် မသိသေးသူများနဲ့ မေ့နေသူများအတွက်ပါ အဲတာကတော့
ပထမဆုံး ကာဆာ ချပြီး font ပြောင်းလိုက်ပါ ent font -time new roman ပေါ့ အင်္ဂလိပ်စာတစ်လုံးရိုက်လိုက်ပါ
ပြီးရင် မြန်မာfont ပြန်ပြောင်းပြီး တစ်လုံးရိုက်လိုက်ပါ ဒါဆို ဒီလိုတွေ့ရမှာပါ fက ဒါဆို အလွယ်လေးပြောင်းရိုက်လို့ရပါပြီ အဲဒီစာလုံးလေးနှစ်လုံးကို copy ကူးထားပါ
မြန်မာလိုရိုက်နေရင်း အင်္ဂလိပ်စာပြောင်းချင်ရင် paste(ctrl+v)ပေးပါ။ ပေါ်လာတဲ့ fက ကို backspace နှစ်ခါနှိပ်လိုက်ပါ ဒါဆို အင်္ဂလိပ်လိုရိုက်လို့ရပြီ
မြန်မာလိုပြန်ရိုက်ချင်ရင်တော့ ctrl=v ပေး၊ ပေါ်လာတဲ့ fက မှာ က ရဲ့နောက်က ကာဆာကို pageup, pagedown
ခလုတ်တွေရဲ့နောက်က မြှားလေးနဲ့ က ရဲ့ ရှေ့ကိုသွား၊ ဒါဆိုfရဲ့နောက်ကိုရောက်ပြီ ဒါဆိုbackspace တစ်ချက်နှိပ်
del တစ်ချက်နှိပ် ဒါဆို မြန်မာလိုရိုက်လို့ရပါပြီ
လုပ်ရမှာကတော့ လွယ်လွယ်လေးပါဗျာ စာတွေများနေလို့ ရှုပ်တယ်တော့မထင်လိုက်ပါနဲ့ စမ်ကြည့်လိုက်ပါ
အလွယ်သိထားရမှာက backspace ပဲဖြစ်ဖြစ် del ပဲဖြစ်ဖြစ် နောက်ဆုံးဖျက်လိုက်တဲ့ type ပဲအသက်ဝင်တာဆိုတော့ အင်္ဂလိပ်ကိုဖျက်ရင် အင်္ဂလိပ်စာရိုက်လို့ရမယ် မြန်မာကိုဖျက်ရင် မြန်မာလိုရိုက်လို့ရမယ်
ဒါပါပဲ အဲ ဒီတစ်ခုရဲ့အားနည်းချက်ကတော့ နောက်ထပ်ဟာတွေ copy လုပ်မိရင် မရတော့ပါဘူး
copy ရဲ့သဘောကိုတော့ သိမယ်ထင်ကြပါတယ်အားလုံးအဆင်ပြေနိုင်ကြပါစေဗျာ...
အလွမ်းမင်းသား, ဇော်ရဲပိုင်, kyansitthar, kyawswarl, lazyguylay, linthuraaung, minthumon, naynaw
26-06-2009, 04:02 PM
ကျွန်တော်တို့ excel မှာ ကော်ပီကူး paste ပြန်လုပ် အဲတာမျိုးပေါ့နော် အဲဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကော်ပီအတွက်တော့ ctrl+c တစ်ချက်နဲ့
ctrl+v တစ်ချက် စုစုပေါင်းနှစ်ချက်တော့နှိပ်ရမှာပေါ့လေ အဲတစ်ချက်ထဲနှိပ်လို့ရတာရှိတယ်ဗျ ဥပမာ d2 cell ကွက်က စာကို d3 မှာကော်ပီထည့်ချင်ရင် ctl+c နဲ့ ctrl+v နှိပ်စရာမလိုပဲ ctrl+d လေးသာနှိပ်လိုက် တန်းကနဲပေါ်လာရောဗျာ ဒန့်တန့်တန့်
c2 cell က စာကို d3 မှာပေါ်ချင်ရင် ctrl+r ဆိုပေါ်လာရောဗျာ
သဘောက အပေါ်cell ကွက်က စာကို နောက်cell မှာကော်ပီကူးချင်ရင် ctrl+d ပေါ့
သူ့ရဲ့ညာဘက် ကိုယ့်ရှဲု့ဘယ်ဘက်က cell ကိုပေါ်ချင်ရင် ctrl+r ပေါ့
ိa2 က စာကို d3 မှာပေါ်ချင်ရင်တော့ မရဘူးဗျ
ဒီနည်းက သူ့ရဲ့အပေါ်က cell ကွက်တွေမှာပဲသုံးလို့ရပါတယ် အပေါ်တည့်တည့် နဲ့ ညာဘက် မှာပဲ သုံးလို့ရပါတယ်
တစ်ခါတစ်လေ အဲလိုလေးများ ကူးဖို့ကြုံလာရင် အမြန်ကူးလို့ရအောင်ပါ အမြဲတမ်းသုံးလို့ရမှာမဟုတ်တဲ့အတွက် သိပ်တော့အရေးမကြီးပါဘူး သိသမျှလေးဝေမျှပေးတာပါ
အောက်ပါအသင်းဝင်6ဦးတို့မှ ကျော်ခန့်ဇော် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကျန်းသုငြိမ်း, kyansitthar, linthuraaung, minthumon, naynaw, phyuphyukyaw
အဲတစ်ခု သတိပေးစရာကျန်သွားတယ်ဗျာ အားလုံးဆောရီး
သူကအဲလိုမျိုး ctrl+d ပဲနှိပ်နှိပ် ctrl+r ပဲနှိပ်နှိပ်
cell ကွက်ထဲ ကာဆာချလို့မရဘူးဗျ
ပုံမှန် enter ခေါက်ဆင်းထားသလို active cell ဖြစ်ယုံလေးအချိန်ပဲရမယ် ကာဆာဝင်သွားရင် ဒီကောင်ကစိတ်ဆိုးပြီး ကိုယ်အမိန့်ကို မနာခံဘူးဗျ စိတ်ဆိုးအောင်မလုပ်မိစေနဲ့နော်
kyansitthar, linthuraaung, minthumon
ဒီကိုလည်း သွားရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ excel နဲ့ပတ်သက်ပြီ ပေါင်းခြင်း နုတ်ခြင်း ဆိုင်ရာ ဖော်မြူလာအသေးလေးနဲ့ အမြန်ဆုံးအမှတ်စဉ်တပ်နည်းလေးတစ်ခုပါ ပညာရှိသတိဖြစ်ခဲဆိုတော့
Last edited by ကျော်ခန့်ဇော်; 29-06-2009 at 11:35 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင်4ဦးတို့မှ ကျော်ခန့်ဇော် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
kyansitthar, linthuraaung, minthumon, naynaw
13-07-2009, 12:48 AM
ဖိုရမ်မှ အစ်ကိုအမများခင်ဗျာ ကျွန်တော်ကတော့ micorsoft office 2007 ကိုသုံးပါတယ် ကျွန်တော် Excel မှာ ကိန်းဂဏန်းတွေရိုက်တဲ့အခါ ရှေ့ဆုံးက0မပေါ်ဘူးဖြစ်နေလို့ပါ ဥပမာ 01245 ဆိုရင် cell ကွက်ထဲမှာ 1245 ပဲပေါ်ပါတယ် အဲဒါ0ပေါ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ပေးလို့ရပါသလဲ ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ စာရင်းတခုကိုရိုက်တဲ့အခါမှာ ရိုက်တဲ့စာရင်းတွေက များလာရင် အပေါ်က ခေါင်းစဉ်ကို မမြင်ရတော့ဘူး အဲဒါကို ခေါင်းစဉ်ပျောက်မသွားအောင် row ခေါက်ထားတာတွေ တွေ့ဘူးပါတယ် အဲဒါဘယ်လိုလုပ်ရပါလဲခင်ဗျာ ကျွန်တော့်အတွက် အသုံးလိုနေလို့ပါ ကျွန်တော် တွေ့ဖူးပြီးမလုပ်တတ်သေးတာတွေတော့ရှိပါသေးတယ် အဲဒါတွေတော့ နောက်နေ့မှမေးတော့မယ် အခုတော့ ဒီလောက်ပဲနော် အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ aung lwin အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
13-07-2009, 03:41 AM
Originally Posted by aung lwin
ဖိုရမ်မှ အစ်ကိုအမများခင်ဗျာ ကျွန်တော်ကတော့ micorsoft office 2007 ကိုသုံးပါတယ် ကျွန်တော် Excel မှာ ကိန်းဂဏန်းတွေရိုက်တဲ့အခါ ရှေ့ဆုံးက0မပေါ်ဘူးဖြစ်နေလို့ပါ ဥပမာ 01245 ဆိုရင် cell ကွက်ထဲမှာ 1245 ပဲပေါ်ပါတယ် အဲဒါ0ပေါ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ပေးလို့ရပါသလဲ
အဲဒီမှာ ဖြေပေးထားတာတွေ ရှိပါတယ်။
အေးချမ်းမောင်မောင်, kyansitthar, linthuraaung, minthumon, yin 91
ပို့စ် 49 ခုအတွက် 110 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
Pagemaker7က Paste Multipal ကို shocutkey
ဘာကို နှိပ်ရပါသလဲခင်ဗျာ။ ရှာမတွေ့လို့ကျေးဇူးပြုပြီးပြောကြပါဦး။
ရပါပြီဗျာ၊ Alt+E,M ကိုနှိပ်ရင် Paste Multipal Box လေးကျလာပါတယ်
Last edited by koaungkyaw7; 02-08-2009 at 10:25 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင်7ဦးတို့မှ koaungkyaw7 အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကျော်ခန့်ဇော်, အေးချမ်းမောင်မောင်, kyansitthar, linthuraaung, minthumon, naynaw, pannuko
Find More Posts by koaungkyaw7